I-Cameroon: Ukulahlekelwa kwesabelomali kwandiswe ku-662 billion FCFA ekupheleni kukaSeptemba 2018 - TELES RELAY
Accueil » UMNOTHO »Cameroon: ukwehluleka kwesabelomali kwandiswe ku-662 billion FCFA ekupheleni kukaSeptemba 2018
(Ukutshala imali Cameroon) - Isabelomali ukuqaliswa Cameroon esikhishwe Ministry of Finance (Minfi), ibonisa ukuthi nezinyanga zokuqala eziyisishiyagalolunye zonyaka 2018, khomba ezingenayo kanye namagranti luphumelele kanye nezindleko abulawe, ibhalansi okuyinhloko ku-318,4 billion FCFA. Ibhalansi eyinhloko yamafutha, okwamanje, i-662 billion FCFA.
Lesi sabelo sezimali sasibi kakhulu ngoba ekupheleni kukaJuni 2018, kwakuyi-601,2 billion FCFA. Ibhalansi eyinhloko bekule nkathi ku-190,5 billion FCFA. Ibhalansi eyinhloko ye-non-oil yayingu-410,7 billion FCFA.
Njengoba kwikota yokuqala 2018 le Minfi ibonisa ukuthi ukuze kuqinisekiswe ukuqaliswa ngendlela efanele kwesabelomali isimo kanye nemigomo nyaka obuyekezwayo, esimweni somnotho, senhlalakahle mali kulungiselelwa kuqhathaniswa nzima izinyathelo ezithathwe kusukela ekuqaleni kwengxenye yesibili yonyaka zaqhubeka.
Izinyathelo ezithathwe nguhulumeni ukunciphisa ukulahlekelwa kwesabelomali zihlanganisa ukuqiniswa kwemali engenayo yokuqoqwa kwemali, ukuqiniswa komthethonqubo wesabelomali nokuthuthukiswa kokulawulwa kokusebenza kwemali yomphakathi.
I-Paris idinga abafundi bayo base-Afrika - i-JeuneAfrique.com
I-RhinoShield Screen Protector ye-iPhone XS / X Ukuphikiswa Okuphezulu Ukuthinteka Ukunciphisa Ukusabalalisa Ubuchwepheshe - VIDEO
U-Fox News umphathi weBret Baier wabonga umSamariya omuhle ngemuva kokuwa kweMontona